musha » Data Protection Policy
Tinokoshesa kuvanzika kwako. Kuti uchengetedze kusazivikanwa kwako, tinoda kukuzivisa nezve maitiro edu epamhepo ruzivo uye sarudzo dzaunadzo maererano nekuunganidza uye kushandisa data rako. Tiri kuita kuti chiziviso ichi chiwanikwe pawebhusaiti yedu uye munzvimbo dzese dzinogona kukumbirwa data rako kuitira kuti zvive nyore kuwana.
Iyo Google Adsense uye DoubleClick DART makuki
Webhusaiti ino inoshandisa makuki kubva kuGoogle, wechitatu bato advertising, kushambadzira ads. Google inoshandisa makuki eDART kupa ads kuvanhu vanoshanyira webhusaiti ino nemamwe mawebhusaiti paInternet.
Unogona kudzima kushandiswa kwemakuki eDART nekuenda kukero inotevera: http://www.google.com/privacy_ads.html. Mafambiro emushandisi anoteedzerwa kuburikidza neDART makuki, ayo ari pasi peGoogle zvakavanzika mutemo.
Makuki anoshandiswa nevechitatu bato ekushambadzira maseva kana advertising network kuunganidza ruzivo nezve zviitiko zvevashandisi pawebhusaiti ino, semuenzaniso. B. Vanhu vangani vakashanyira webhusaiti yako uye kana vakaona zviziviso zvakakodzera. Instazoom.mobi haina kuwana kana kutonga pamusoro pemakuki aya, anogona kushandiswa nevechitatu mapato.
Ruzivo rwemunhu rwunounganidzwa.
Kana iwe instazoom.mobi kushanya, iyo IP kero yewebhusaiti uye zuva uye nguva yekuwana yakanyorwa. Ruzivo urwu rwunongoshandiswa kuongorora mapatani, kutonga webhusaiti, kutevedzera mafambiro evashandisi uye kuunganidza dhata revanhu rekushandisa mukati. Kunyanya kukosha, iyo IP kero dzakarekodhwa hadzina kubatana neruzivo rwemunhu.
Links kune ekunze mawebhusaiti
Isu takapa zvinongedzo pane ino webhusaiti kuti zvikuitire nyore uye nereferensi. Isu hatisi mutoro wezvakavanzika zvemawebhusaiti aya. Iwe unofanirwa kuziva kuti zvakavanzika zvemawebhusaiti aya zvinogona kusiyana neyedu.
Ichi chirevo chinogona kuvandudzwa chero nguva pakufunga kwedu. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvakavanzika mutemo we instazoom.mobi ndapota taura nesu pa [email inodzivirirwa]